Njedebe: Mee, Mekọrịta ma soro URLs Mgbasa Ozi Google gị | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ iji Google Analytics, otu njirimara ị ga - eji bụ nsuso Mgbasa Ozi ha. Mgbasa ozi mgbasa ozi chọrọ ka ị gbakwunye mgbanwe dị iche iche querystring na njikọ. A na-ahụ mgbanwe ndị ahụ ma jiri ya na-eleta nleta na ibe n'ime Google Analytics. Site na iji mkpọsa mkpọsa, ị gaghị ahapụ ihe ọ bụla na mgbagwoju anya nke nchịkọta - dị ka ndị na-ezo aka, njikọta njikọ, njikọ email, wdg. Nleta ọ bụla na-egosipụta nke ọma maka mkpọsa ị na-eme nke na-eweta nleta na saịtị gị.
Ụdị dị ka Hootsuite nwere ikike iji mejupụta nsuso mgbasa ozi Google Analytics. Ndị ọzọ nyiwe, dị ka nyiwe email, gụnyekwara ike ịgbakwunye mkpọsa querystrings na-akpaghị aka. I nwekwara ike ahu nagide Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Google nke na-ewu URL iji wuo mkpọsa URL.
Ma ọ bụ, ị nwere ike jiri Nkwụsị, usoro ntanetị maka ijikwa mgbasa ozi Google Analytics gị n'ụzọ dị mfe. Ihe ikpo okwu gunyere:
Onye Smart URL Nrụpụta - Naanị pịnye otu UTM ma ọ bụrụ na ị mebeghị ya. Terminus chetara usoro mgbasa ozi gị niile. Ọ na - egosikwa gị ụzọ dị mma maka ọkara ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, mgbe onye na-ajụ gị bụ cpc, ọ ga-atụ aro ka ị jiri bing, google, facebook, wdg na ọ bụghị akwụkwọ akụkọ dị ka isi mmalite.
Nchịkọta nchịkọta Google - Bubata usoro mgbasa ozi gị niile site na nchịkọta Google ka ị ghara itinye ha n'otu n'otu. Alert ga-enweta ịdọ aka na ntị email mgbe ọ bụla anyị chọpụtara oke mkpọsa ọhụụ ma ọ bụ ụzọ okporo ụzọ ọhụrụ. Usoro mgbasa ozi gị niile nọ n'otu ebe, n'agbanyeghị ebe e kere ha.
Mee ma ọ bụ bugoo URL na nnukwu - Mee otu ụyọkọ URLs na otu mpaghara mkpọsa ahụ? Pịnye ma ọ bụ mado URLs na Terminus ga-ewu ha niile n'otu oge. Y’oburu na inwee URL na njiko UTM na akwukwo ozo, inwere ike ibubata ha n’ime Terminus.
Ntọala - Jiri atọrọ atọ iji tinye otu mpaghara nke UTM na URL ọ bụla ọsọ ọsọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ mgbasa ozi Bing na utm_campaign = summer_sale, utm_medium = cpc na utm_source = bing, ị nwere ike ịchekwa nchikota ahụ na ọkwa mgbasa ozi ọrịre Bing. Nwere ike iji ya mee ihe ngwa ngwa iji njikọta ọ bụla na URL ọ bụla.
Ọrụ Mgbasa Ozi - Nweta ọkwa dị elu gbasara mkpọsa ahịa gị.
Projects - can nwere ike iji oru ngo kpokọta URL maka isi ahịa mbọ. Ọ bụrụ na ị bụ gị n'ụlọnga, ị nwere ike iji oru kewapụ URLs ọ bụla nke gị ahịa.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - Kpọọ ndị otu gị ma rụọ ọrụ ọnụ na ọrụ gị.
Tags: ga mkpọsaga mgbasa ozi nsusoGoogle Analyticsgoogle analytics mkpọsagoogle analytics mkpọsa nsusogoogle analytics mkpọsa nsuso url
Sep 18, 2014 na 9:32 PM
Daalụ maka blog post, Douglas. Enwere m obi ekele na ị na-ewepụta oge iji nyochaa Terminus ma dee banyere ya.
Mara mma dị egwu. Ọ bụrụ na ndị mmadụ anaghị eji koodu utm, ha kwesịrị ịmalite.